တူးဖော်ရရှိခဲ့သည့် အင်ကြင်းကျောက်ကြီးကို သယ်ဆောင်မည့် ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် အခွန်ပေးဆောင်ရမည်ြ? - Yangon Media Group
တူးဖော်ရရှိခဲ့သည့် အင်ကြင်းကျောက်ကြီးကို သယ်ဆောင်မည့် ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် အခွန်ပေးဆောင်ရမည်ြ?
မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတွင် တူး ဖော်ရရှိခဲ့သော အင်ကြင်းကျောက်ကြီးကို တိုင်းအစိုးရမှသယ်ဆောင်ခွင့် ပြုမည်ဖြစ်သော်လည်း ကုမ္ပဏီအ နေဖြင့် တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအတွက် အခွန်ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်သလို ယင်းကျောက်တုံးနှင့်နီးစပ် သော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်ကိုလည်း ဆောင်ရွက်ပေးရမည်ဖြစ် ကြောင်း သိရသည်။
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မကွေးမြို့နယ်၊ ပေပင်စမ်းကျေးရွာအနီးတွင်အရှည်ပေ ၁၂ဝ ခန့်၊ လုံးပတ် လှည်းဘီးအရွယ်အစားခန့်ရှိနှစ် ပေါင်းသန်းချီရှိနေသည့် အင်ကြင်း ကျောက်ကြီးကို ထရီးဂျိတ်ကုမ္ပဏီက တူးဖော်ရရှိထားရာဒေသခံများက အဆိုပါအင်ကြင်းကျောက်ကို ပြည်ပသို့ရောင်းချခြင်းမပြုရန် တား မြစ်လျက်ရှိပြီး ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်အဖြစ်ထားရှိရန်ကိုလည်း တောင်း ဆိုထားရာ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအနေဖြင့် အဆိုပါကျောက်ကို သက်ဆိုင်ရာ ကုမ္ပဏီအားသယ် ဆောင်ခွင့်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအား ထိုက်သင့်သောအခွန်ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်သလို နီးစပ်သောကျေးရွာအား ဖွံ့ဖြိုးရေးများ ဆောင်ရွက်ပေးရမည်ဟု မကွေးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့၊ သယံဇာတ၊ လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီး ဦး မြင့်ဇော်က ဒီဇင်ဘာလ ၇ ရက် နေ့တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
”ပြည်ထောင်စုက ခွင့်ပြုချက်ကျထားပြီးသားကို ကျွန်တော်တို့ တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကညှိ နှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးရမှာပါ။ တိုင်း ဒေသကြီးအတွက်လည်း အခြေခံဥပဒေမှာပါတဲ့အတိုင်း ထိုက်သင့်တဲ့ အခွန်ပေးဆောင်ရမယ်။ ကျောက်တုံးကြီးနဲ့နီးတဲ့ ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်လည်း ဆောင်ရွက်ပေးရမှာပါ။ တိုင်း ဒေသကြီးအခွန်ပေးဆောင်ဖို့အတွက် တိုင်းအခွန်ဦးစီးဌာနက ထိုက်သင့်တဲ့ အခွန်ပေးဆောင်ဖို့မတွက်ချက်ရသေးပါဘူး”ဟုဝန်ကြီးဦးမြင့် ဇော်က ပြောကြားသည်။ ထရီးဂျိတ်ကုမ္ပဏီသည် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ အင်ကြင်း ကျောက်စုဆောင်းသယ်ယူ Export ပို့ခွင့်ကို ပြည်ထောင်စုအစိုးရအား အခွန်ဆောင်ပြီးကြောင်း ပြည်ထောင်စုအစိုးရ၏ ခွင့်ပြုချက်များလည်းပါရှိကြောင်း စတုတ္ထတန်းစား အင်ကြင်းကျောက်များကို တစ်မက်ထရစ် တန်လျှင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃၃ဝဝ နှုန်းဖြင့်တင်ပို့ရောင်းချခွင့်ကို ပြည် ထောင်စုမှခွင့်ပြုပြီး ထရီးဂျိတ်ကုမ္ပဏီမှ ပြည်ပသို့တင်ပို့ရောင်းချရန်ခွင့်ပြုသည့် စတုတ္ထတန်းစားအင် ကြင်းကျောက် ၉၁ ဒသမ ၄၇၇ မက် ထရစ်တန်အတွက် သတ္တုတွင်းဦးစီးဌာနသို့ ဓာတ်သတ္တုခွန် နှစ်ရာခိုင်နှုန်းအဖြစ် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၆ဝ၃၇ ဒသမ ၄၈ အား ငွေစာရင်း အမှတ် (အမ်ဒီ ဝ၁၁၂၃ဝ) သို့လည်း ကောင်း၊ ဓာတ်သတ္တုခွန် နှစ်ရာခိုင် နှုန်းနှုတ်ပြီး အမှတ် (၁) သတ္တုတွင်း လုပ်ငန်းသို့ ခွဲဝေမှုအချို့ ၈ ဒသမ ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းအဖြစ် အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၂၄၄ဝ၆ ဒသမ ၅၂ နှင့် ဒေသပေါက်ဈေး သုံးရာခိုင်နှုန်းအဖြစ် မြန်မာကျပ်ငွေ ၅၄၈၈၆၂ တို့အား မြန်မာစီးပွားရေးဘဏ် နေပြည် တော်ငွေစာရင်း အမှတ်(OA-01084-SEE) သို့လည်းကောင်း အခွန်ပေးသွင်းထားပြီးဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ထရီးဂျိတ်ကုမ္ပဏီမှမန်နေဂျင်း ဒါရိုက်တာဦးမင်းရွှေက”ကျွန်တော် တို့ကုမ္ပဏီက အင်ကြင်းကျောက်စု ဆောင်းသယ်ယူတင်ပို့တာတွေကို မကွေးတင်မကပဲ တခြားနေရာ တွေမှာလည်း လုပ်ကိုင်နေပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ လုပ်ငန်းတွေနားပြီး စောင့်နေရတယ်။ တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရက ကျွန်တော်တို့ကိုဘာမှအ ကြောင်းကြားခြင်း မရှိသေးပါဘူး။တခြားတိုင်းတွေနဲ့တစ်ပြေးညီဖြစ် စေချင်ပါတယ်။ လုပ်ငန်းရှင်တွေက အခွန်ပေးဆောင်လုပ်ကိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် တိုင်းအစိုးရအနေနဲ့ ကူညီဆောင်ရွက်ပေးစေချင်ပါတယ်။ ပြည်ထောင်စုအစိုးရကိုအခွန်ဆောင်ပြီး လုပ်ဆောင်တာဟာတိုင်းကို အခွန်ဆောင်လုပ်တာနဲ့ အတူ တူပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့ လုပ်ငန်းရှင်တွေက ပြည်ထောင်စုကို အခွန်ဆောင်ရသည်ဖြစ်စေ၊ တိုင်းကိုအခွန်ဆောင် ရသည်ဖြစ်စေ တစ်နေရာမှာပဲ ဆောင်ချင်တယ်။ ဘယ်လောက် ဆောင်ရဆောင်ရ လုပ်ငန်းရှင်တွေအဆင်ပြေမှ ကိုက်မှလုပ်မှာပါ”ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။ အဆိုပါ အင်ကြင်းကျောက်ကို လက်ရှိတူးဖော်ရရှိထားသည် ထက်ထပ်မံတူးဖော်၍ ရနိုင်သေး ကြောင်းကို ဒေသခံပြည်သူများက ခန့်မှန်းထားပြီး အစိုးရအနေဖြင့် ထိန်းသိမ်းခြင်းမရှိပဲ ကုမ္ပဏီအား ရောင်းချပါက ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုများ ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အနည်းဆုံး အခကြေးငွေ ဖိုရမ် ဒီဇင်ဘာ ၂၃ ရက်တွင် ရန်ကုန်၌ ပြုလုပ်မည်
ပရိသတ်များ ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရနိုင်သည့် Bird Box စိန်ခေါ်မှုကို မပြုလုပ်ကြရန် Netflix သတိပေး
သမဝါယမ စနစ် ဖော်ဆောင်ရေး လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ၏ ဆွေးနွေးချက် သဘောထား သုံးရပ်ထွက်ပေါ်
အမေရိကန်နှင့် အင်္ဂလန်နိုင်ငံတို့ အပါအဝင် နိုင်ငံပေါင်း ကိုးနိုင်ငံမှ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမ?